ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေး' သည်ဤဇူလိုင်လတွင်ထိတ်လန့်သွားလိမ့်မည်!
Shudder သည်၎င်း၏နယ်မြေအားလုံးတွင်သီးသန့်အခွင့်အရေးများရရှိထားသည် တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေးအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော Thriller အသစ်နှင့် Justin Powell နှင့် David Charbonier တို့၏ပထမဆုံးရေးသားမှုတွင်ပါဝင်သည်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် Bobby (Lonnie Chavis) နှင့်သူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကီဗင် (Ezra Dewey) ကိုကျောင်းမှအိမ်သို့ပြန်ပို့ရာတွင်ပြန်ပေးဆွဲခံရချိန်တွင်စိတ်ကူး။ မရသည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာညတစ်ည သူ၏နယ်နမိတ်မှလွတ်မြောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် Bobby သည်မှောင်မိုက်ခန်းမများသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ သူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုတောင်းခြင်းကိုသူသတိမထားမိဘဲအလှည့်တိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ပို၍ ဆိုးသည်မှာအခြားသူစိမ်းတစ် ဦး ရောက်ရှိလာခြင်းမှာသူနှင့်ပြန်ဆုံဆည်းရမည့်သူနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအစီအစဉ်သည်ကီဗင်အတွက်ပျက်စီးခြင်းအချို့ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ Bobby သည်အကူအညီနှင့်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသောတိုင်းပြည်များသို့မည်သည့်နေရာကိုမျှမခေါ်ဆိုရန်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်နှင့်ကီဗင်ကိုအသက်ရှင်ရန်သို့မဟုတ်ကြိုးစား။ သေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ချားဗစ်စ် (ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ) နှင့် Dewey (The Djinn) ကို Kristin Bauer van Straten မှမြင်ကွင်းဖန်သားပြင်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသည် (စစ်မှန်သောသွေး), Scott မိုက်ကယ် Foster (ရှေးရှေးတုန်းက) နှင့်မိက္ခာ Hauptman (သံချေး Creek).
"၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးဘောင်ကနေ တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေး တင်းမာမှုကိုဘယ်တော့မှမလျှော့ချနိုင်သည့်နည်းဖြင့်ချုပ်ကိုင်ထားကြောင်း Shudder ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Craig Engler ကပြောကြားခဲ့သည်။ "Justin နဲ့ David တို့ဟာယနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်မှန်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်လိုက်ရပြီး Shudder ထက်တောင်ဒီမဆုတ်မနစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စီးနင်းမှုကိုပရိသတ်တွေတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာမရှိတော့ဘူး"
“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့အာကာသထဲမှာ ဦး ဆောင်နေတဲ့ Shudder နဲ့လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေး"Charbonier နှင့် Powell ကဆက်ပြောသည်။ Lonnie နှင့် Ezra တို့သည်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်စွာတီထွင်နိုင်သည့်ခိုင်မာသော၊ ကွဲပြားခြားနားသော ဦး ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်ပုံပြင်များကိုနေ့တိုင်းမြင်တွေ့ရသည်မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပရိသတ်များသည်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခဲ့သည့်အတွက်ပျော်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
Charbonier နှင့် Powell's The Djinn မေလ IFC Midnight တွင်ပွဲ ဦး ထွက်မတိုင်မီအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Dewey ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ပါ ၀ င်ပြီးသူတို့ဘာတွေယူဆောင်လာသလဲဆိုတာကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေး!
ကိုလိုက်ရှာနေသည် တံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေး ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အိုင်ယာလန်၊ ကနေဒါ၊ Australiaစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံများရှိ Shudder နှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ 29, 2021!
David CharbonierEzra DeweyJustin PowellKristin Bauer ဗန် StratenLonnie ChavisShudderတံခါးနောက်ကွယ်မှကောင်လေးWaylon ဂျော်ဒန်